Mpempe Mega Ezinaụlọ A320 FSX & P3D - Rikoooo
Ụlọ nke Mega Pack nke Airbus A320 FSX & P3D
downloads 693 414
Ọrụ ụgbọ elu Airbus na ndị ọrụ ya, François Doré, kwadoro site na Luis Quintero, mmelite site n'aka Rikoooo
Emelitere na 01 / 08 / 2018: Agbakwunyere na FMC (Honeywell FMC) na-akwụghị ụgwọ, gbakwunyere ụda ụda na-efu maka V-Speeds na "Ground Handling". Ugbu a dakọtara na Prepar3D v4.3. Emelitere ya na installer v10.5
Emelitere na 10 / 03 / 2018: Kwụsị ihe na-ezighị ezi nke flaps na ọkwá dị elu nke dị na ya na mgbanwe nke gauges (nke Tomi Koivunen mere "project_airbus_modification.zip"). Tụkwasị na njigide Jekọb Larsen V-Speed ​​(nghazi ngwangwa nke V1, V2, na V3) na nkwupụta ọnụ. Gbakwunyere panel "Flight Data" (nke Hans Zuidervaart dere) nke na-eme ka o meghee ọnụ ụzọ na ngwongwo ihe dị na ntinye dị mfe, na-emekwa ka o kwe omume iwelie ọsọ nkedo na-enye ozi n'ozuzu banyere ụgbọ elu na ala nke ụgbọelu. Added panel that allows automatic Pushback operations na ụda (nke Rob Barendregt "rcbgh-50.zip" dere)
Emelitere na 05 / 09 / 2017: Auto-installer version 10, ugbu a dakọtara na Prepar3D v4 (nwalere), mmelite nke dsd_fsx_xml_sound na dsd_p3d_xml_sound_x64 n'ụdị 5.2.5 (Nkuzi na-arụ ọrụ na P3D v4)
Nke a bụ mega mkpọ nke Airbus A320 Family na 145 repaints nke dị elu. Nke a nwere ihe niile Airbus nke ezinụlọ A320 (ụdị anọ) na ọdịda ọdịda dị ka CFM56 na International Aero Engines V2500.
Na-agụnye maka ihe nlereanya ọ bụla na ikpo mkpuchi dị elu (VC) na mbipụta pụrụ iche V3 (3.05) site François Doré, nke na-eme ka ihe omimi dị mma (ọ dị mkpa ịgụ akwụkwọ ntuziaka na Bekee ma ọ bụ French).
Na-agụnye BLUE LED mkpọ na-enye ìhè gị mebere ọdụdụ na-acha anụnụ anụnụ LEDs.
Na-agụnye GPWS, AUTOFLARE, wdg na ọtụtụ ntụgharị ihu ọha na jetway na koodu ego maka ihe ọ bụla. Odide nke VC gbanwere na HD.
DỊ mKPA: Ụgbọ elu na-apụta Nzuzo & Ọchịchịrị ejiji (engines na ngwá ọrụ). Gụọ akwụkwọ ntụziaka zuru ezu nke François Doré, bụ nke a gụnyere ịmara usoro mmalite ahụ na Bleeds, onye edemede ahụ ka na-enye ọrụ CTRL + E ka ọ bụrụ na ị na-amalite bọmbụ na-akpaghị aka na Fly Site na Waya na "NORMAL LAW".
AKWỤKWỌ AHỤRỤ: Ọ bụrụ na Onyunyo n'ofe egosighi, ịchọrọ FSX-SP2. Ogwe niile chọrọ ka opekata mpe FSX-SP2 ma ọ bụ FSX-Achọgharị ma ọ bụ FSX Ntugharị Steam ma ọ bụ Prepar3D ...
Ọ bụrụ na ụgbọ elu gị amaliteghị na oyi na nchịkwa ma ọ bụ na ị ngwa ngwa ngwa ngwa mgbe ọ gbusịrị, nke a bụ n'ihi na ụgbọ elu ndabara gị bụ ụgbọ elu nke ndabara FSX, yana ULM, na-efe efe na "Ọdụ ụgbọ mmiri Friday".
Iji dozie nsogbu ahụ, ị ​​ghaghị ịmepụta ụgbọ elu, na ụgbọelu ị họọrọ, na ọdụ ụgbọelu nke ị họọrọ, mgbe a na-eme ka ihe nkiri ahụ gbanyụọ usoro niile nke ụgbọelu a (engines, batrị, ignition) na ịchekwa ụgbọ elu site na nlele igbe dị na windo "Save flight" nke a na-akpọ "mee ka ụgbọ elu a".
Gbalịa kwụsị FSX.
Mepee faịlụ FSX.CFG (ya na Notepad) di:
Ọ bụrụ na ịnọ na Vista ma ọ bụ asaa ma ọ bụ Windows 10 "C: - Ndị ọrụ - aha njirimara - App Data - Roaming - Microsoft - FSX"
ọ bụrụ na ị nọ na Windows XP "C: - Akwụkwọ na Ntọala - aha njirimara - Data Ngwa - Microsoft - FSX"
Na mpaghara [MAIN], gbakwunye akara: DisablePreload = 1
Malitegharịa ekwentị FSX, nsogbu mezie.
Ndepụta ntanetị site na nlereanya:
House na agba
Air Canada - Ochie livery
British Midland International - Ọtụtụ BMI
Finnair - Ochie livery
Iberia - Ochie livery
Scandinavian Airlines - Ochie livery
US Airways (4 Ochie Liveries)
United Airlines (Nga & Post Merger Livery)
British Midland International - Ọtụtụ BMI (3 Liveries)
Kokpiiti ikanam acha ANỤNỤ
Onye edemede: Ọrụ ụgbọ elu Airbus na ndị ọrụ ya, François Doré, kwadoro site na Luis Quintero, mmelite site n'aka Rikoooo
A400M v2.0 Airbus Military AGB FSX & P3D
Ngwakọta ngwugwu Volbus A340 Vol 2 FSX & P3D